रामायणमा रावणको भूमिका निभाउने अरविन्द त्रिवेदीको निधन ? यस्तो रहेछ वास्तविकता – Online Nepal
May 4, 2020 591
एजेन्सी। टेलिभिजन सिरियल रामायणमा रावणको भूमिका निभाउने अभिनेता अरविन्द त्रिदेवीको मृ’त्युको खबर हावासरी फैलियो । आइतबार सोसल मिडियामा दिनभरी उनको मृत्युको खबरले निकै चर्चा पायो । तर उनको मृ’त्युको खबर मात्र एउटा अफवाह भएको प्रमाणित भयो जब उनका भतिजो कौस्तुव त्रिदेवीले ट्वीट गर्दै उनी सकुशल भएको जानकारी दिँदै झुटो खबर नफैलाउन अपिल गरे ।
आफ्नो ट्वीटमा कौस्तुभले लेखे, ‘मेरा काका अरविन्द त्रिवेदी लंकेश पूर्ण रुपमा ठिक छन् र सरक्षित छन् । झुटो खबर फैलाउन बन्द गर्न अनुरोध गर्दै कृपया उनी सकुशल भएको खबर फैलाउन आग्रह गर्छु । धन्यवाद ।’
आइतबार अरविन्द त्रिवेदीले गरेका थिए ट्वीटः
आइतबार दिउँसो मात्रै अरविन्द त्रिवेदीले एक ट्वीट गर्दै ‘श्रीकृष्ण’ सिरियलमा कृष्णको भूमिका निभाउने सर्वदमन बनर्जीलाई सोसल मिडियामा स्वागत गर्दै ट्वीट गरेका थिए । जसमा उनले लेखेका थिए, ‘जय श्री कृष्ण । तपाईंलाई स्वागत छ ।’
हालै बनायो भ्युअरशीपको नयाँ विश्व रेकर्डः
पुनः प्रशारणको क्रममा ‘रामायण’ सिरियलले भ्युअरशीपको एउटा नयाँ विश्व रेकर्ड बनाएको छ । यसबारे दुरदर्शनले एक ट्वीट गर्दै लेख्यो, ‘विश्व रेकर्ड, दुरदर्शनमा रामायणको पुनः प्रसारणले संसारभरीको भ्युअरशीपको रेकर्ड तोडेको छ । यो कार्यक्रम सबैभन्दा धेरै हेरिएको कार्यक्रम बनेको छ जसलाई १६ अप्रिला ७.७ करोड दर्शकले हेरे ।’
Prevमुख सम्हालेर बोल्न रमेश खरेललाई सर्वेन्द्रको चेतावनी !
Nextबिहे पछि आचलको भेट पल सङ्ग ( भिडियो सहित )
ससस्त्र प्रहरी हवलदारकै बुडि संग सिपाईको उठबस || आफ्नै जुनियरले साथीले श्रीमती भगाईदिदा हवलदार ट्वा (हेर्नुहोस भिडियो)